“ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျက်စီးစေနိုင်သော အချက် ၇ ချက် နှင့် ၄င်းအချက်များကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ” | ဒီပကျော်(နည်းပညာ)
“ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျက်စီးစေနိုင်သော အချက် ၇ ချက် နှင့် ၄င်းအချက်များကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ”
April 16, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
“ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျက်စီးစေနိုင်သော အချက် ၇ ချက် နှင့် ၄င်းအချက်များကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ”(The7Self Sabotages And How To Overcome Them)
(အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှ ဖတ်ပါ။)
သင့်မှာ ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ခုခုရှိနေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မရည်ရွယ်ပဲ ဖျက်ဆီးမိသူ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် …
1. I don’t know what I really want
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လိုချင်တာနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးထင်တာ
3. I don’t have time, money or resources.
ကိုယ့်မှာ အချိန်၊ ငွေနဲ့ လိုတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ မရှိဘူးထင်တာ
4. It’s too difficult
ကိုယ်လိုချင်တာဖြစ်ဖို့ အရမ်းခက်တယ်လို့ ထင်တာ
5. I have to do it my way
ဘယ်သူ့အကြံဥာဏ်မှ မယူပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ လုပ်မယ်စဉ်းစားတာ
6. They don’t want me to …
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာထက် အခြားသူတွေ ဖြစ်ချင်တာပဲ စဉ်းစားတာ
7. I am afraid
ဆုံးရှုံးရမှာကို လိုတာထက် ပိုကြောက်တာ
ဒါတွေဖတ်ပြီးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တွေးကြည့်ပါ
– သင်ရော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖျက်စီးမိနေပြီလား၊
– အပေါ်ထဲက အချက်ဘယ်နှစ်ချက်တိုက်ဆိုင်လဲ၊
– ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မယ် စဉ်းစားလဲ၊
– အဲဒါလေးတွေ တွေးပြီးပြုပြင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အချက်လေးတွေပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာကို ရွေးချယ်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ မအားလပ်လို့ တစ်ဦးချင်း Reply မလုပ်ပေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။
သင့်ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ရည်မှန်းချက်များ မချမှတ်မှီ အရေးတကြီး ချက်ချင်းလုပ်ရမှာကတော့ သင်အမှန်တကယ် ဘာကိုလိုချင်သလဲဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လူတော်တော်များများမှာ Goal Conflict တွေ ရှိပါတယ်၊ သင်သတိမထားမိတာသာ ဖြစ်ပါမယ်၊ သင်ဟာတစ်ပြိုင်တည်းမှာ အများကြီးရဖို့ ကြိုးပမ်းနေမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သင်ဟာ မတူညီတာတွေ အများကြီးကို တစ်ခါတည်းလိုချင်နေမယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒီလို အာရုံပြန့်ပြားမှုတွေကြောင့် ဘာမှ မစတင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေမယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ သင်လိုချင်တဲ့ Goal ဟာ လက်တွေ့မကျတာပါပဲ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ Goal တွေဟာ သင့်ဘ၀ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ အခြားသူများ ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ကို အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ ချမှတ်တဲ့ Goal တွေရယ် လိုချင်တာတွေရယ်ဟာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖျက်စီးတာတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်မှုကို ပျက်စီးစေမယ့် အလုပ်တွေကို စတင်ဖို့ စိတ်အားတက်ကြွနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ သင်လိုချင်တဲ့ Goal တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ တိမ်မြှုပ်နေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သင့်ဘ၀မှာ ယုံကြည်ရသူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး သင်လိုချင်တဲ့ Goal ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ Goal ဟုတ် မဟုတ်နဲ့ ရအောင်ကြိုးစားသင့် မသင့်ကို တိုင်ပင်သင့်တယ်။
သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ အလုံးစုံ အခြေအနေကောင်းမွန်မှု အတွက် သင့်လိုချင်တဲ့ Goal တွေကို မဖြစ်မနေ ခြုံငုံလေ့လာရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍအားလုံးကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်း၊ ခံစားမှု၊ ယုံကြည်သက်ဝင်မှု၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ အတတ်ပညာများ တတ်ကျွမ်းမှု အစရှိသော ဧရိယာအသီးသီးအတွက် ကောင်းမွန်ပြီး မျှတမှုရှိအောင် ကြိုပမ်းရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ယထာဘူတကျပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ Goal တွေဟာ သင့်ဘ၀ရဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကို ပြည့်စုံစေလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အခြား Goal တွေနဲ့ အံ့ဝင်ခွင်ကျဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒါတွေကြောင့် သင့်ကိုယ်သင့် တန်ဖိုးထားမှုကို မြင့်တက်လာစေလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်တော့ သင့်မှာ ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ Goal ရှိလေလေ သင်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအရည်အသွေးတွေက မြင့်တက်လေလေပါပဲ၊ အဲဒါကြောင့် သင်ရွေးချယ်မယ့် Goal ဟာ သင့်အနေနဲ့ စိတ်အားထက်သန်ပြီးတဲ့ အရာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိုချင်တာနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးထင်တာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိုချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ မထိုက်တန်ဘူးထင်တဲ့ စိတ်တွေဟာ များသောအားဖြင့် မသိစိတ်ထဲကနေ လာပါတယ်။ အဲဒါဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကုိုတန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားတန်ဖိုးထားမှုဟာ သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ရယူဖို့မှာ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သင်နဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ သင့်ကိုယ်သင် ယူဆတဲ့အရာတွေကိုပဲ ရယူနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းနိုင်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှု၊ တန်ဖိုးထားမှုမရှိတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖျက်ဆီးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားတန်ဖိုးထားမှု မရှိတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကနေပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သံသယတွေ၊ မယုံကြည်မှုတွေကနေတဆင့် အောင်မြင်ဖို့ရည်မှန်းချက်တွေ ရရှိမှာကို တားဆီးပါတယ်။
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ပြဿနာကတော့ သင့်ရဲ့မသိစိတ်ကနေပြီးတော့ သင်အောင်မြင်မှုကိုရရှိတာ၊ ချမ်းသာတာဟာ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆနေတတ်တာပါပဲ။ တစ်ချို့လူတွေဟာ အောင်မြင်မှုကို ရရှိဖို့လုပ်ရတာ ရှက်စရာကောင်းသလိုလို အပြစ်ရှိသလိုလို ခံစားတတ်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် မကောင်းတဲ့ကံတွေပြီးရင် ကောင်းတဲ့ကံတွ အလိုလို လာမလိုလို လည်း ပြောတတ်ကြပါသေးတယ်။ အဲဒီလိုစကားတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ စကားလုံးတွေ အနေနဲ့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားမှုအတွက် ကုိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်ရှိတယ်ထင်တဲ့စိတ်တွေ၊ ရှက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေလည်း ဖြစ်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားဖို့ မစဉ်းစားခင် အဲဒီစိတ်တွေကို အရင်ပြုပြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ပြန်လည်တွေးတောခြင်းဟာ နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတွေရဖို့ သင့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နုိုင်ဖို့အတွက် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတွေပါပဲ။ ကျန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာ သင်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကို ကြုံတွေခဲ့ရသလဲနဲ့ အဲဒါတွေကို ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သလဲဆိုတာတွေကို စဉ်းစားပါ။ သင့်အနေနဲ့ ယခင်က ကြုံတွေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်၊ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိတဲ့အချိန်တွေမှာ ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ အခုနောက်ထပ်လိုချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ရရှိဖို့ အခက်အခဲတွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့တွေကလည်း အရင်ဖြစ်စဉ်တွေ အတိုင်းပါပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ စိတ်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ အဲဒီစိတ်တွေကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ အစားထိုးဖို့ပါပဲ။ သင့်ရဲ့အတွေးထဲမှာ အပျက်သဘောစိတ်တွေ ၀င်လာတာနဲ့ တန်းပြီး သတိထားမိအောင် လေ့ကျင့်ပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ အစားထိုးပါ။
တိုနီရော်ဘင်ကပြောပါတယ်။ အခြားအရာတွေအားလုံးထက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘ၀ပေးအခြေအနေတွေက ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများ ရဲ့ ခရီးပန်းတိုင်ကို မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့အများစုရဲ့ ဆင်ခြေတွေက ဟိုဟာမရှိလို့ ဒီဟာမရှိလို့ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက အခွင့်အရေးပိုရတယ်၊ ဗီဇအရပိုတော်တယ်၊ ပညာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ငွေကြေးနဲ့ မိသားစုအနေအထားတွေမှာ သာတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရတဲ့ အိပ်မက်တွေကို ရအောင်လုပ်သွားသူတွေမှာ ရှိတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေဟာ သာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀အခြေအနေနဲ့ မကွာခြားလှပါဘူး။ သူတို့မှာ ပိုမြင့်တဲ့ IQ မရှိဘူး၊ သူတို့ပညာပိုမတတ်ဘူး၊ သူတို့မှာ နောက်ခံအင်အား သင်တို့ထက်ပိုမရှိပါဘူး။ သူတို့မှာ အိပ်မက်ကြီးကြီးမက်ဖို့နဲ့ အဲဒါတွေကို ရအောင် လုပ်ဖို့ တိတိကျကျ နည်းလမ်းတွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ လေ့လာသင်ယူပြီး အသုံးချသွားကြတာပါ။
ဘ၀မှာ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ဖို့ပဲ အချိန်တွေ လုံလုံလောက်လောက်ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် အဖြစ်များကြတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက Goal Conflict ဆိုတဲ့ ဘာကိုလိုချင်မှန်း ကွဲကွဲပြားပြား မသိကြတာပါ။ ဒါက ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့ တစ်ပြိုင်တည်းမှာ တစ်ခုခုနဲ့တစ်ခု သဘောတရားမတူတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေထားရှိတာပါပဲ။ ဥပမာ – လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာ စွန့်စားမှုလည်းမလုပ်ချင်ဘူး၊ လွတ်လပ်မှုလည်း လိုချင်နေတာမျိုးပါ။ ဒီလိုဖြစ်တာက တစ်ခါတစ်ရံမှာ သဘာဝကျတတ်ပေမယ့် ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို ပြီးဆုံးအောင် မလုပ်နိုင်ပဲ ဆင်ခြေပေးတဲ့အနေနဲ့လည်း သုံးတတ်ကြပါတယ်။ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကိုယ့်ဘ၀မှာ တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကို သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို အချိန်ကာလအလိုက် လုပ်ချင်တာတွေ သတ်မှတ်ခြင်း စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြုလုပ်တာဟယ ဒီအခြေအနေမျိုးကို ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုသတိရဖို့လိုတာက သင်ဘယ်အရာကို လိုချင်လိုချင် ရအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများပေမယ့် သင်လိုချင်သမျှ အရာအားလုံးကိုတော့ မရရှိနိုင်ပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ သင်လိုချင်တာကို ရဖို့ ကြာလွန်းတယ် ထင်တဲ့အချိန်မှာ အလွန်များပြားသော အောင်မြင်မှုရရှိသူတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အထိ သူတို့လိုချင်တာကို အာရုံစိုက်လုပ်ရင်း ရရှိသွားကြတာကို မမေ့စေချင်ပါဘူး။
လူတစ်ယောက်ဟာ သူဖြစ်ချင်တာတွေကို သတ်မှတ်နိုင်ပြီထားဦး၊ အဓိက အဟန့်အတားကတော့ ဇွဲလုံ့လ ၀ီရိယနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှ ပျက်ကွက်နေတာပါပဲ။ လူတော်တော်များများဟာ ပျင်းကြတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သဘာဝကိုက စိတ်ဖိစီးမှုများပြီး ရေရှည်အာရုံစိုက်ရမယ့် ကိစ္စတွေကို ရှောင်ရှားချင်ကြပြီး ချက်ချင်းလက်ငင်း ပျော်စရာကောင်းပြီး လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတွေကို အလေးသာတတ်ကြတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ နေဖို့လူတစ်ယောက်အတွက် အခက်ခဲဆုံးက ချက်ချင်းလက်ငင်း ပျော်ရွှင်မှုတွေက လက်ယပ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ တစ်ခုတစ်ခုကို စူးစိုက်ပြီး အာရုံပြုနေဖို့ပါပဲ။
တစ်ခုရှိတာက ဘ၀မှာ တန်ဖိုးထားရမယ့်အရာတွေကို ရရှိဖို့ဆိုရင် အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့စကားတွေကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားနဲ့ အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်းဟာ အရမ်းကို အကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ သင်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို လမ်းရှည်တစ်ခု ခရီးစဉ်တစ်ခုလို့မြင်ကြည့်ပါ။ သင်အခုဘယ်နေရာကို ရောက်နေလဲ။ ဘယ်နေရာကို ဦးတည်ထားလဲ။ သင့်အနေနဲ့ ရုတ်တရက် လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလမ်းကြောင်းက သင့်ကို ဘယ်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်မလဲ။ အကယ်၍ သင်လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုက အချိန်ယူပြီး ခက်ခဲမယ်ဆိုရင်တောင်မှာ သင့်ကိုယ်သင် သတိပေးရမှာက အဲဒီကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဆက်နေထိုင်ခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးပါပဲ။ ခက်ခဲတဲ့အရာဆီကို သွားလိုက်ရင် ခက်ခဲတာ မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်။ အဲဒါက ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့ ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက် လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့အားအင်တွေကို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ သတ္တိတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးစားရမှုတွေ၊ ကျောထောက်နောက်ခံရှာထားရမှုတွေလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိကို အမှန်တကယ်စေတနာရှိသူတွေရဲ့ အထောက်အပံ့တွေ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဆွေးနွေးပေးမှု၊ အားပေးမှုတွေကလည်း ဒီနေရာမှာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
အရည်အချင်းရှိပြီး ပါးနပ်တဲ့လူတွေ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဘာကြောင့် သူတို့ကိုယ် သူတို့ ပျက်စီးစေမယ့် မိုက်မဲတဲ့အရာတွေကို ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဘ၀ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအချို့မှာ အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ်ဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်သူတွေ၊ ကျောင်းမှထွက်ရသူတွေ၊ အလုပ်ပြုတ်သူတွေ၊ အဖမ်းခံရသူတွေ၊ မိသားစုကို ဆုံးရှုံးရသူတွေ၊ စီးပွားပျက်သူတွေ၊ စွပ်စွဲပြစ်တင်ခံရပြီး မျက်နှာပေးခြင်း မခံရတော့သူတွေမှာ တူညီမှုတွေရှိနေကြောင်းကို လေ့လာဆန်းစစ်သူတွေက တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့မှာရှိတဲ့ အခြားသူတွေအပေါ်ဘယ်လိုထိခိုက်လဲ မစဉ်းစားဘူး၊ အခြားသူတွေရဲ့ အကြံဥာဏ်၊ သဘောထားတို့ကို ဂရုမစိုက်ဘူး မိမိယူဆတဲ့လမ်းအတိုင်းပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားဟာ ဆိုးဝါးတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ပြဿနာအများအပြားဟာ မိမိစဉ်းစားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း လုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတာကို လိုတာထက်ပိုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအယုအဆဟာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှု၊ ပုန်ကန်လိုမှု၊ ခေါင်းမာမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းနေမှု၊ စိတ်မရှည်မှု၊ မဖြစ်မနေလုပ်ရမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေမှု စသည်တို့အပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကနေ ပေါ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းရင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့်အနေနဲ့ သင်ဟာ ဘယ်သူ့အကြံဥာဏ်မှ မယူပဲ၊ မည်သူ့ သဘောထားမှ မစဉ်းစားပဲ၊ အခြားသူများကို ထိခိုက်နိုင်မှုကိုပါ ဂရုမစိုက်ပဲ သင်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုသာ ရွေးချယ်ပြီးတော့ သင်လိုချင်တဲ့အရာကို ရမယ်လို့ စဉ်းစားနေပြီဆိုရင် အဲဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်နေပါပြီ။
သင့်ကိုယ်သင်မကြာခဏမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုက သင်ဟာသင် အမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့ ဘ၀မှာ နေနေတာလား၊ အခြားသူတွေ သင့်ကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ ဘ၀မှာ နေနေတာလား။ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဖို့ ပျက်ကွက်တာဟာ သင့်ရဲ့အောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
အခြားသူတွေအပေါ် အလွန်အမင်းထည့်သွင်း စဉ်းစားခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်အားတက်ကြွမှုနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ အပေါ်မှာ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒါဟာ သင့်ဟာသင်မလုပ်တာကို အခြားသူတွေကြောင့်ဆိုပြီး စွပ်စွဲပစ်တင်နေဖို့ ဖြစ်စေပါတယ်။ သင်အောင်မြင်ရင် အခြားသူတွေ မနာလိုဖြစ်မှာ စိတ်ဆိုးမယ်၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်၊ အလွန်အမင်း ဆင်းရဲချို့တဲ့သွားမယ် ဆိုတဲ့ မဆီမဆိုင် အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပါ။ အဲဒီအကြောင်းပြချက်တွေဟာ သင့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းအားကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ အချို့သူတွေက သင့်ရဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုတွေကို ပြစ်တင်ရှုံ့ချတတ်တယ်ဆိုရင် ဒီလိုလူတွေက သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို တားဆီးထားမယ့်သူတွေပါပဲ။ ဒါကို လက်ခံမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အခြားသူတွေကို လွှဲအပ်ထားသလိုဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုံးဝဖျက်ဆီးပစ်တာနဲ့ တူတူပါပဲ။
လူသားတွေမှာ ရှိတဲ့ ကြီးမားတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုဟာ အခြားသူတွေဆီက ခွင့်ပြုချက်တောင်းယူတာပဲ။ အခြားသူတွေ ခွင့်မပြုမှာကို စိုးရိမ်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြီးကြီးမားမား ဖျက်ဆီးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေ သင့်ကို ဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတာကို စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် သင်ရှေ့မတိုးနိုင်တဲ့အချိန်မှာ သင့်ဘ၀သင် တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ထားတဲ့စိတ်ဟာ အခြားသူတွေဆီက ခွင့်ပြုချက်ရယူမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အတင်းအကျပ် အစားထိုးခြင်း ခံရပါတယ်။ သင့်ဘ၀မှာ ရှိတဲ့သူအများစုဟာ သင့်ကို ကူညီချင်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ သင့်ကို ဘယ်လိုကူညီရမယ်ဆိုတာကို သဘောမပေါက်ကြပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ သင့်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အခန်းဖော်များကို သင့်ကို ဘယ်လိုကူညီတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာ သင်ပြပေးလို့ ရပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအပြင် Personal Coaches, Counselors, Mentors, Teachers စသူတွေကို ရှာဖွေ အကြံဥာဏ်ယူခြင်းဟာလည်း သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။ ========================
ကြောက်စိတ်ဟာ အောင်မြင်မှုအတွက် နံပါတ် ၁ အဖျက်သမားဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်စိတ်ရှိနေတာဟာ အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။ ဘေးရန်များမှ ကာကွယ်ပေးဖို့ပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြောက်စိတ်တွေဟာ အကြိမ်တော်တော်များများမှာ လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး ပြင်းထန်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများဟာ ဘာကိုကြောက်လို့ကြောက်မှန်း မသိတာပါ။ သူတို့တွေ ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြောက်ကြတယ်။ ရှုံးနိမ့်မှု၊ အောင်မြင်မှု၊ ခွင့်ပြုချက်မရမှု၊ အပြစ်တင်ခံရမှု၊ နာကျင်မှု နဲ့ ရုန်းကန်ရမှုတွေပါ။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာ လူတွေကို မပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေမှာ ဆက်ပြီးရှိစေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြောင်းလဲမှုဟာ အခုလက်ရှိအခြေအနေထက် ပိုဆိုးကောင်းဆိုးသွားနိုင်တဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့အခြေအနေကို ဦးတည်တယ်လို့ လူတွေက နားလည်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေဟာ ယုတ္တိရှိချင်ရှိရှိမယ်၊ မရှိချင်မရှိပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ အမှန်တကယ် စွန့်စားရမှုဟာ ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ အမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့ အခြေအနေကို လေ့လာဆန်းစစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မိမိအမြင်တွေကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲယူခြင်းဆိုတဲ့ နည်းစနစ်က ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးကို အတွေ့အကြုံမှ သင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ အစားထိုးပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာဟာ သင်လိုချင်တဲ့ရလာဒ်ကို မရတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါပဲ။ ရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ယုံကြည်မှုတစ်ခုကတော့ ငါမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကြောင့် ငါဟာ မအောင်မြင်တဲ့သူပဲလို့ မြင်တာပါ။ အတွေ့အကြုံမှ သင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာဟာ ခရီးလမ်းဆုံးတစ်ခုမဟုတ်ပဲ ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုကို သွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာကို သင့်ကို နားလည်စေချင်တာပါပဲ။ ဒီအယူအဆဟာ အောင်မြင်မှုအတွက်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်ရှိအောင်မြင်မှုတွေဟာ ခရီးလမ်းဆုံးမဟုတ်ပဲ အခြားပိုမြင့်မားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူဖို့ ခရီးမှတ်တိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ မအောင်မြင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာ စိုးရိမ်စိတ်တွေကို စိတ်ရှည်ခြင်း၊ အချိန်ယူကြိုးစားခြင်းနည်းတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီး ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်ကလေးတွေမှာ အောင်မြင်မှုလေးတွေ လေးစားလောက်စရာ စပြီးရလာပြီဆိုရင် သင့်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတွေဟာ မြင့်တက်လာနိုင်ပြီး ပိုမိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ မိမိရည်မှန်းချက်ကို ရအောင်လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာ အဲဒီ ရည်မှန်းချက်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်ဖြစ်စေ မဖြစ်လာသေးသည်ဖြစ်စေ မိမိကိုယ်ကို လေးစားကြည်ညိုစိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေအပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု မြင့်လာလေလေ ပိုပြီးကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်လေလေပါပဲ။
တစ်ကြိမ်ဖတ်ရုံ Share ရုံထက် တစ်နေရာရာမှာ ကူးထားပြီး စိတ်ဓါတ်ကျတိုင်း ပြန်ဖတ်ရင် အကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ညီ၊ ညီမအရွယ် လူငယ်တွေအတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လို့ အချိန်မရတဲ့ကြားထဲက ကြိုးစားပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Credit to KoNaingGyiNotes
Previous Postမြောက်ကိုရီးယား တာလတ်ပစ်ဒုံး စမ်းသပ်မှု မအောင်မမြင်ဖြစ်Next Postမယားငယ်နှင့် ရန်ဖြစ်ပြီး ဆွဲကြိုးချ သေဆုံး